चितवनकी सुजिता भण्डारीको पछिल्लो अपडेट आयो यस्तो – List Khabar
Home / समाचार / चितवनकी सुजिता भण्डारीको पछिल्लो अपडेट आयो यस्तो
काठमाडौ । हराएको ९ दिन पछि फेलापरेकी चितवनकी सुजिता भण्डारीको शव परिवारका सदस्यले बुझेका छन् । उनको शव गत असार २० गते जंगलमा फेला परेको थियो । उनको रहस्यम मृत्युको कारण भने अझै खुल्न सकेको छैन । पोष्टमार्टम रिपोर्टले उनको मृत्युको कारण नखुलाएका कारण घटना रहस्यमय भएको हो । घटना रहस्यम भएको र घटनामा अरु कसैको हात रहेको भन्दै परिवारका सदस्यले आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
पोष्टमार्टम रिपोर्टवाट मृत्युको कारण नखुलेका कारण प्रहरी भिसेरा परिक्षणको रिपोर्ट कुरेर बसेको छ । उनको शरिरको भित्र र बाहिर कुनै चो’ट नदेखिएका कारण घटनामा अरुको संलग्नता नभएको हुनसक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ । तर उनले केही कुरा से’वन गरे नगरेको पुष्टि भि’से’रा रिपोर्टवाट मात्र थाहा हुने प्रहरीले जनाएको छ । त्यसैले प्रहरी भिसेरा रिपोर्ट कुरेर बसेको छ ।
सुजिताको घटनामा संलग्न आरोपित सार्वजनिक नहुँदासम्म शव नबुझ्ने अडान लिँदै आएका परिवारले सोमवार शव बुझेका छन् । असार ११ गतेबाट हराएकी सुजिताको शव ९ दिन पछि जंगलमा भेटिएको थियो। प्रहरीले शवसँगै प’तेरा मा र्न प्रयोग हुने त’रल प’दार्थ रहेको बोतल फेला पारेको थियो । उनले प्रयोग गर्ने मोवाइल पनि फेला परेको छ । सुजिताले असार ११ गते आफू अ’पह’र’ण’मा परेको भनेर आफूलाई फोन गरेको भन्दै दिदी कविताले खोजी गरिदिन प्रहरीमा मौखिक जानकारी दिएकी थिइन्।
Previous मंगलबार ग्रहचक्रमा ठूलो परिवर्तन, सबै राशिलाई असर ! कुन राशिलाई कस्तो असर छ, हेर्नुस् !
Next देउवा सरकार टालाटुली बटुली, कति राम्री पुतली जस्तै हो -केपी ओली